You are here:Home Page 1	List/Grid	Archive: Page 1	Wasiirada arrimaha dibedda IGAD oo war cad ka soo saaray xaalka Kismayo
Addis Ababa (Caasimada Online) Waxaa goordhow magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ku soo dhammaaday shir ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibedda ee dalalka urur goboleedka IGAD. Shirkan ayaa gaar… Read more »
Jawaari: Ma aqbali doonno mooshin lagu burinayo qarannimada
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxmed Sheekh Cismaan “Jawaari”, ayaa sheegay inuusan ogolaan doodnin mooshin aan micno ku dhisneyn oo lagu bur buriyo horumarka dalka. Jawaari oo la hadlayay warbaahinta ku hadsha… Read more »
Britain oo ka qeylisay Al-Shabaab
Sida uu qoray wargeyska The Daily Tellegraph,Xukuumada London ayaa ka digtay Qatarta dhanka amaanka kaga imaaneyso Ururka Al-shabaab ee ka dagaalama dalka Soomaaliya xariirka dhowna la leh Al-Qaa’ida. Dowlada Britain… Read more »
Kooxda Madaxweyne Shariif oo shirar ka dhan ah DF ka wada Muqdisho
Waxaa magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ku laabtay Madax ka tirsan Xisbi Aalla Sheikh ee uu ka mid ahaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif. Siyaaasiyiin Caan ah oo… Read more »
DF: Ethiopia ha joojiso sida dal ula macaamilka maamulka Somaliland
Xukuumada Soomaaliya ayaa ka dalbatay Xukuumada Dalka Itoobiya in ay tageerada ka joojiso ay siiso Maamulka Soomaaliland kadib markii sida la sheegay dowlada Soomaaliya waraaq qoraal ah u dirtay Xukuumada… Read more »
R/Wasaare Saacid oo arrin lagu farxo ka sheegay magaalada Muqdiho
Ra’iisul wasaaraha Xukuumada Federaalka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday arrin farxad leh oo ah in uu kordhay dhaqaalaha dalka kadib qabsoomidii shirkii London iyo iskaashiga ay shacbiga Soomaaliyeed u… Read more »
Howlihii Turkiga ee Muqdisho oo halis ugu jira in la joojiyo (Warbixin)
Muqdisho (Caasimada Online) - Weeraro kala duwan oo ay Shabaab ka fulisay Muqdisho, ayaa ku qasbaya maal-geliyayaasha, ganacsatada yo hay’adaha gar gaarka inay fikrad labaad ka qaataan ballaarinta howlahooda magaalada Muqdisho…. Read more »
6-da Madaxweyne ee Jubbaland ayaa taageeray doodihii DF Somalia
Kismaayo (Caasimada Online) - Doodda Jubbaland, waxa ay mar walba ahayd; Dowladda Somalia oo leh “Aan hogaanka qabano, si dadka deegaanka oo idil ay uga qeyb galaan maamuka” iyo Kooxda Axmed… Read more »
Dhageyso: Fartaag “Nin Villa Somalia uu madfac ugu soo dhacayo, yuusan waxba u hanqal taagin Kismaayo”
General Cabdullahi Sheikh Ismaacil Fartaag oo ah madaxweyne ku xigeenka Jubbaland, garabka Axmed Madoobe, ayaa wareysi uu kaga hadlay dhismaha maamulka Jubbaland siiyey idaacad ku talla magaalada Muqdisho. Fartaag, ayaa… Read more »
Madaxweyne Obama oo qirtay arrimo ay dowladdiisa ka sameysay Somalia
Washington, U.S. (Caasimada Online) Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo khubad ka jeedinaayay Jaamacadda Natitonal Defense ee Magaaladan Washington, ayaa ka hadlay arrimo badan. wuxuu ka hadlay xabsiga Guantanamo, adeegsiga diyaaradaha Dronska,… Read more »
1 / 78712345678910Next »	CAYAARAHA